Drafitra famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 8 Novambra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Drafitra famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 8 Novambra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro ho an'ny anio dia avy amin'ny bokin'ny Estera 1: 1-22. Vakio sy ho voatahy.
Estera 1: 1-22:
1 Ary tamin'ny andron'i Ahasoerosy (Izany no Ahasuerera, izay nanjaka, nanomboka tany India ka hatrany Etiopia, faritany fito amby roa-polo amby zato), 2 tamin'izany andro izany, raha nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'i Ahasoerosy mpanjaka ny fanjakany, izay tao Sosana renivohitra, 3 Tamin'ny taona fahatelo nanjakany, dia nanao fanasana ho an'ny mpanapaka rehetra sy ny mpanompony izy; ny herin'i Persia sy ny Media, ny manan-kaja sy andriana amin'ny faritany, izay eo alohany: 4 Rehefa naneho ny haren'ny fanjakany be voninahitra sy ny voninahitry ny fahalehibiazany izy andro maro, dia valo-polo amby zato andro. 5 Ary rehefa tapitra izany andro izany, ny mpanjaka dia nanao fanasana ho an'ny olona rehetra izay tao Sosana renivohitra, na lehibe na kely, fito andro teo an-kianjan'ny tanimbolin'ny mpanjaka; 6 Aiza no misy fantsona fotsy, maitso ary manga, afatotra amin'ny tady vita amin'ny rongony fotsy sy volomparasy ho an'ny peratra volafotsy sy andry marbra: ny fandriana dia volamena sy volafotsy, eo ambonin'ny lampivato mena sy manga ary fotsy, mainty , marbra. 7 Ary nampisotro azy ireo tamin'ny siny volamena (samy hafa ny samy izy,) ary ny divain'ny mpanjaka be dia be, araka ny fanjakan'ny mpanjaka. 8 Ary ny fisotroana dia araka ny lalàna; tsy nisy nifanery; fa toy izany no nanendren'ny mpanjaka ny tompon-tranony rehetra hanao araka ny sitrapony avy. 9 Ary Vasty, vadin'ny mpanjaka, nanao fanasana ho an'ny vehivavy tao an-tranon'ny mpanjaka izay an'i Ahasoerosy mpanjaka. 10 Ary tamin'ny andro fahafito, rehefa faly ny fon'ny mpanjaka, dia nandidy an'i Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, ary Carcas, fitoeram-panjaka fito izay nanompo teo anatrehan'i Ahasuerus mpanjaka, 11 To ento i Vashti mpanjakavavy ho eo anatrehan'ny mpanjaka miaraka amin'ny satro-boninahitry ny satro-boninahitra, hampisehoseho ny olona sy ny lehibe ny hatsarany, fa tsara tarehy izy. 12 Fa Vasty, vadin'ny mpanjaka, nandà tsy hankatò ny didin'ny mpanjaka tamin'ny kapiteniny, dia tezitra indrindra ny mpanjaka, ary nirehitra tao aminy ny fahatezerany. 13 Ary ny mpanjaka dia nilaza tamin'ny olon-kendry izay mahalala ny fotoana (fa toy izany koa ny fomban'ny mpanjaka amin'izay rehetra mahalala ny lalàna sy ny fitsarana: 14 Ary ny manaraka dia Carhena, Shethar, Admatha, Tarsisy, Meres, Marsena, ary Memucan, andriana fito tao Persia sy Media, izay nahita ny tavan'ny mpanjaka ary nipetraka voalohany tany amin'ny fanjakana;) 15 Inona no hataontsika amin'i Vasty, vadin'ny mpanjaka, satria tsy nahatanteraka ny didin'i Ahasoerosy mpanjaka izy? ataon'ireo efi-trano? 16 Ary Memucan namaly teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe: Vasty, vadin'ny mpanjaka, dia tsy nanao ratsy tamin'ny mpanjaka fotsiny, fa tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay tany amin'ny isan-tokony eran'i Ahasoerosy mpanjaka. 17 Fa ho avy any amin'ny vehivavy rehetra izao ataon'ilay mpanjakavavy izao, ka hataony tsinontsinona ny vadiny eo imasony rehefa voalaza, dia nasain'ny mpanjaka Ahasoerosy nentina teo anatrehany i Vasty, vadin'ny mpanjaka, fa tsy nandeha. 18 Toy izany koa no holazain'ny zazavavy Persia sy Media amin'ny andriana rehetra, izay efa nahare ny nataon'ny mpanjakavavy. Toy izany no hisehoan'ny fanamavoana sy ny fahatezerana be. 19 Raha sitraky ny mpanjaka, dia avelao ny didin'ny mpanjaka hivoaka, ary aoka hosoratana eo amin'ny lalàn'ny Persiana sy ny Medianina, mba tsy hovana, fa tsy hiverina eo anatrehan'i Ahasoerosy mpanjaka intsony i Vashti; ary avelao ny mpanjaka hanome ny fanjakany ho an'ny tsara hafa noho izy. 20 Ary raha havoaka eran'ny fanjakany manontolo ny didin'ny mpanjaka izay hataony, (fa lehibe izany), ny vehivavy rehetra dia manome voninahitra ny vadiny, na lehibe na kely.
Previous lahatsoratraFifadian-kanina sy vavaka 7 Andro hanokafana varavarana mihidy
Next lahatsoratraDrafitra famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 9 Novambra 2018
10 Ny vavaka dia manondro ireo mpanimba ny fanambadiana
Vavaky ny ady amin'ny fanafihana ny fiangonana
Salamo 13 Ilay Andininy Hafatra amin'ny andininy
Andinin-teny momba ny fahaiza-mitarika